तस्वीर- राधेश्याम तिमल्सिना
करिब ३२ वर्ष सरकारी सेवामा विताएर पूर्व सचिव किशोर थापा अहिले साझा पार्टीमा आवद्ध भएका छन् । इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमीका थापाले साझा पार्टीको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले देशको विकास हुन नसक्नुमा राजनीतिज्ञ भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र र बुद्धीजीवीहरुको बढी भूमिका रहेको तर्क गरेका छन् । थापासँग नेपालीपत्र डटकमका लागि उद्धव थापा र ज्ञानेन्द्र पौडेलले गरेको कुराकानी :
लामो समय राष्ट्र सेवामा समर्पित हुनुभएको तपाईं अवकासपछि आरामदायी जीवन बिताउने बेलामा राजनीतिक दौडधुपमा लाग्नुभएको छ ? सरकारी पदहरुमा बसेर काम गर्दाका उपलब्धी पर्याप्त भएनन् ?
मैले ३२ वर्ष राष्ट्र सेवामा बिताँउदा धेरै कामहरु गर्न पाएँ तर, कतिपय कामहरु चाहीँ गर्न पाइन । किनभने म राजनीतिक नेतृत्वको अन्तर्गत रहेर उहाँहरुको नीति र निर्देशनमा मानेर काम गर्नुपथ्र्यो । आफुले चाहेको काम आफ्नो हिसाबले गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यसमा पनि विगत २५ वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता रह्यो । त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्व नै धरमराएको जस्तो देखियो । उहाँहरुले देशलाई स्पष्ट दिशा दिन नसकेको मैले प्रत्यक्ष देखेँ । मैले त्यो अवधिमा धेरै दलका मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरुसँग काम गरेँ । उहाँहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि काम गर्न सक्नुभएन । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् । त्यसबिचमा देश एउटा ठूलो द्वन्दमा फस्यो । अहिले त्यो अवस्थाबाट पार पाइसकेका छौं । मैले केही समय प्राविधिक कर्मचारी र केही समय प्रशासकको रुपमा देशलाई धेरै योगदान दिन सकेको रहेनछु । त्यो अवधिमा मेरो धेरै पदोन्नती भयो । इन्जिनियरबाट सचिवसम्म भए । मेरो आर्थिक अवस्थामा पनि प्रगति भयो तर देशको उन्नती भएन । देशका आम नागरिकहरु गरिब, दयनीय र पिछडिएको स्थितिमा भएको बेलामा म मात्रै धनी भएर, मेरो मात्रै उन्नती भएर, म मात्रै ठूलो घरमा बसेर महङ्गो गाडीमा चढ्नु निरर्थक लागेको हुनाले अब यो देश बनाउने अभियानमा म पनि लाग्नुपर्छ ताकी मैले अरुलाई दोष दिनु नपरोस भनेर राजनीतिमा लागेको हुँ ।
३२ वर्ष सरकारी सेवामा रहँदा केही वर्ष सचिवको रुपमा पनि काम गर्नुभयो । त्यसबेला धेरैजना मन्त्रीहरुसँग नजिकै रहेर काम गर्नुभयो । देश विकास र समृद्धिप्रति उहाँहरुमा कत्तिको स्पष्ट भिजन पाउनुभयो ?
धेरैजसो मन्त्रीहरु सुरुमा आँउदा देश बनाउन भनेरै आउनुहुन्थ्यो । धेरै दलका मन्त्रीहरुमा त्यो भावना पनि थियो तर रहँदा बस्दा उहाँहरु त्यो भावनाबाट बिचलित भएको र ध्यान अन्तै गएको मैले पाए । र, अर्को अनौठो कुरा चाहीँ उहाँहरु त देशको मन्त्री हो तर, आफुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जिल्लाको मन्त्रीको रुपमा मात्रै आफुलाई प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरुसँग मेरो द्वन्द्व पनि त्यसै कारणले हो ।
म सचिव हुँदा मैले पुरै देशलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपथ्र्यो तर मन्त्रीज्युहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट माथि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा चाहीँ मेरो उहाँहरुसँग द्वन्द हुन्थ्यो । यद्यपी, मैले अधिकांश मन्त्रीहरुसँग मिलेरै काम गरे । उहाँहरु जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट आउनुभएको हो त्यस क्षेत्रले अलि बढी महत्व पाउनु स्वभाविक हो । तर, मन्त्रीले पुरै देशलाई वेवास्ता गरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन ।
तपाईले त स्थापित दलहरुमा नै ठाउँ खोजेको भए पनि निकै उच्चस्तरको जिम्मेवारी पाउनुहुन्थ्यो किन नयाँ पार्टी खोल्नेतिर लाग्नुभयो ?
अहिलेका स्थापित दलहरुमा गएको भए व्यक्तिगत रुपमा मेरो निकै उन्नति हुन्थ्यो । मैले ठूलै पद पनि पाउथे होला तर त्यसरी देशको उन्नती हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन् ।
त्यसोभए अहिले भएका कुनै पनि राजनीतिक दलहरु काम लाग्ने छैनन् ?
म त्यसो भन्दिन । अहिलेका राजनीतिक दलहरुले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यसको जति नै तारिफ गरे पनि कमै हुन्छ । ती दलका नेताहरुले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छोडेर, परिवार छोडेर जेल बसेर परिवर्तन ल्याउनुभएको छ । त्यो त ठूलो योगदान हो नि । अब भने जुन उद्धेश्यले ती दलहरु स्थापना भएका थिए त्यो त पुरा भयो । हामी चाहीँ अब नयाँ उद्धेश्यको साथमा अगाडी आएका छौं
भनेपछि पुराना राजनीतिक दलहरु ‘आउटडेटेड’ भए ?
उहाँहरुको जमाना अब सकियो जस्तो लाग्छ मलाई । अब चाहीँ नयाँ पुस्ताले नयाँ सोचको साथ देशको विकास र समृद्धि अगाडी लैजाने बेला भयो । उहाँहरुले राजनीतिक रुपमा यो देशलाई यो अवस्थमा ल्याइपु¥याउनुभयो । त्यसको चाही कदर गर्नुपर्छ ।
ती राजनीतिक दलमा एउटा पुस्ताको जमाना पो सकियो होला त, युवा पुस्ता पनि त उत्तिकै रुपमा नेतृत्वमा आइरहेको छ नि ? उनीहरुले बोकेको राजनीतिक दर्शन नै अब काम छैन भन्ने तपाईंहरुको निष्कर्ष हो ?
पार्टी त आउटडेटेड हुँदैन । पार्टीमा पनि पुरानो पात झर्ने नयाँ पालुवा आउने त भइरहन्छ । तर, पुरानो पार्टीले आँफुलाई पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो होला जस्तो देखिदैन । मैले उनीहरुले आफूलाई पुर्नसंरचित गनर्छक कि भन्ने आशा गरेको पनि हो । तर त्यसो भएको छैन् । त्यसको उदाहरण के हो भने, उहाँहरुलको दलमा रहेका युवाहरुको जुन आवाज छ त्यसको सुनुवाई भएको मैले पाइन । मैले धेरै आदर गर्ने युवा नेताहरु ती दलहरुमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरु एकदमै ‘सप्रेस्ड’ अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
नेपालको विकास नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष लगाउँछन र कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दोषि देखाउँछन् । तपाईको बुझाइमा चाहीँ दोषि को हो ?
अब यो दोष त हामी सबैले लिनुपर्छ । कर्मचारीले पनि लिनुपर्छ, बुद्धिजीवीले पनि लिनुपर्छ राजनीतिक नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ । तर, मैले हेर्दा धेरै दोष चाही बुद्धिजीवीहरुको छ, जसमा कर्मचारीहरु पनि पर्छन । बढी दोष कर्मचारीको छ । भागबण्डाको कूसंस्कार विकास गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि बढी पढे लेखेका प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल जस्ता बुद्धिजीवी वर्गको भूमिका धेरै छ ।
देशको विकासको लागि राजनीतिक दलहरुमात्रै सुध्रिएर हुँदैन कर्मचारीतन्त्रमा नै व्यापाक सुधार आवश्यक छ ?
कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै होइन, यो सँगसँगै नागरिक समाज छ जसलाई हामी ‘एलिट क्लास’ अर्थात प्रबुद्ध वर्ग भन्छौं । प्राध्यापक, डाक्टर, इञ्जिनियर, वकिल लगायतका सबैले असली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्यो । प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नपर्यो । आफ्नो लागि भन्दा पनि देशको लागि सोच्नुपर्यो ।
नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरुले कहाँ कमजोरी गरे ? कहाँनेर चुके उनीहरु ?
२०६२–०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि समृद्धिको एजेण्डामा अघि बढ्नुपर्ने हो । अरु एजेण्डामा अलमलिएर बस्नुपर्ने थिएन । अहिले पनि अनावश्यक राजनीतिक एजेण्डामै रुमल्लिरहेका छौं । अहिलेको राजनीतिक एजेण्डा वास्तविक हो कि बनाइएको हो मलाई थाहा छैन् । यो उहाँहरुले नै बुझ्नुहुन्छ । अब यस्ता राजनीतिक एजेण्डामा देश अलमलिन सक्दैन् । नयाँ पुस्ता अल्मलिन सक्दैन् । अब हामी शान्ति, समृद्धि र विकासको एजेण्डामा अघि बढ्ने हो । उहाँहरु पनि यसमा अघि बढ्छन भने जनताले उहाँहरुलाई पत्याँउदै जान्छन् । उहाँहरु पनि नविकरण हुँदै जानुहुन्छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित हुँदै जान्छ यदि जानुभएन भने चाहीँ अरु राजनीतिक शक्ति वैकल्पिक शक्तिलाई नै जनताले अगाडि ल्याँउछन् ।
अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई वेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिन्छ र ?
सकिँदैन । राजनीतिक परिस्थितिलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसलाई उल्झाइरहने र आगोमा घिउ थपिरहने त गर्नुहुन्न । सबै त्यही उल्झनमा लागिरहनु हुन्न । किनभने विगत ६० वर्षदेखि सबैजना त्यही राजनीतिक एजेण्डामा लागिरहे । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल किसान मजदुर सारा त्यसैमा लागे । कर्मचारी समेत लागे । अब चाहीँ सबैले आफ्नो काम गर्नुपर्छ । अब हामी समृद्धितर्फ लाग्नैपर्छ ।
अहिले संविधान कार्यन्वयको चरणमा छ । केही राजनीतिक दलहरु यो संविधान पूर्ण छैन यसलाई संसोधन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । केही चाहीँ अहिले संसोधन आवश्यक छैन कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भनिरहेका छन । संविधानप्रतिको तपाईंहरुको धारणा चाहीँ के हो ?
तत्कालिन संविधान सभाले संविधान बनाएपछि अहिले व्यवस्थापिका संसदमा रुपानतरण भएको छ । संविधानसँग उठेको छलफल त्यही व्यवस्थापिका संसदमा नै हुनुपर्छ । कुनै अध्यारो कोठामा वा देश बाहिर गरिने छलफल र सम्झौता हामी मान्दैनौ । जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा गएर ती िविषयको छिनोफानो हुनुपर्छ । प्रक्रियागत रुपमा निर्णयहरु हुनुपर्यो । त्यहाँ भएका कुरा हामी स्वीकार्छौ तर बाहिरबाट गरिएका कुनै बलजफ्ती हामीलाई मान्य हुनेछैन् ।
हाम्रो संविधान धेरै लोकतान्त्रिक र समावेशी छ । यसको अक्षरश पालना गर्न समय लाग्छ । अरु देशको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन दशौं बिसौं वर्ष लागेको छ । त्यसकारण हामी अहिल्यै आत्तिनुपर्ने छैन । तर, संविधान लागु हुनै नदिइकन विरोध गर्ने, प्रावधान हटाउने कुरा ठिक होइन । सडक बाट यस्ता विषयको निर्णय हुन सक्दैन । आफ्नो एजेण्डामा संसदमा लडाइँ गर्ने हो । लोकतन्त्र भनेको नै त्यही हो । हामी पद्धतिमा विश्वास गर्ने हुनाले संसद भन्दा बाहिर गरिने कुनै निर्णयहरु साझा पार्टीलाई मान्य हुनेछैन् ।
तपाईंहरुको पार्टी घोषणाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
हाम्रो पार्टीको संरचना तलदेखी माथि उठ्ने खालको छ । त्यसैले तलदेखी संगठन निर्माण हुँदै माथी आउन समय लागेको हो । कार्यलय निर्माण हुँदैछ । पार्टीको सफ्ट लञ्चको तयारी पनि हुँदैछ । यी सबै काम छिट्टै सम्पन्न गरेर पार्टीको घोषणा गर्नेछौं ।
शहरमा र केही सम्पन्नहरु माझ चिनिएका केही व्यक्ति तपाईंहरुको पार्टीमा संलग्न हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको राजनीतिक इतिहास छैन । लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएका पार्टीहरुको माझमा कसरी स्थापित हुन सक्छौं भन्ने योजना छ ?
हामीले उहाँहरुलेभन्दा धेरै कम मात्रै राजनीति बुझ्छौं । हामी चाहिनेभन्दा बढी राजनीति बुझ्न पनि चाहदैनौं । हाम्रो देशलाई चाहिनेभन्दा बढी राजनीति बुझेको मान्छे आवश्यक रहेनछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । हामी हाम्रो काम गर्न जान्दछौं । त्यसैले हाम्रो विधामा सफलता बाँड्न चहान्छौं । जस्तो कि, मेरो विज्ञता भनेको इञ्जिनियरिङमा हो र मैले यही विज्ञता जनतासँग सेयर गर्ने हो ।
काम गर्न पनि त कुनै ठाउँ चाहियो, त्यो ठाउँमा पुग्न जनताको साथ चाहियो । राजनीतिक परिचय नभएको, सीमित घेरामा रहेको मान्छेलाई मतदाताले चिन्नुप¥यो, विश्वास गर्नुप¥यो नि, होइन ?
मैले आफ्नो विधामा काम गर्दा गाउँ–गाउँ पुगेको छु । मैले नेपालको समाज बुझेको छु । त्यतिबेला उहाँहरुले मलाई एउटा कर्मचारीको रुपमा चिन्नुहुन्थ्यो । त्यहाँका मानिसहरुसँग अहिले हामी परिचित छौं । उहाँहरुले हाम्रो काम देखिसक्नुभएको छ । अब उहाँहरुले मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ । हामी त्यति अपरिचित होइनौं ।
निर्वाचन सम्मुखमा छ तपाईंहरु बल्ल पार्टी घोषणाको तयारीमा हुनुहुन्छ । संगठन बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईंहरुको सहभागिता उपस्थितिको लागि मात्रै हुने भो होइन ?
हाम्रो पार्टीको समर्थनमा मैले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको छु । यो निर्वाचनमार्फत हामी जनतामाझ पुग्छौं र नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा झलक हामी देखाउँछौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईंहरुको प्रमुख प्रतिस्पर्धि शक्ति हुन हो ?
हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी पुराना राजनीतिक दलहरु नै हुन् । हामीले उहाँहरुलाई पुरै विस्थापित गर्ने अवस्था त छैन । तर उहाँहरुलाई दवाव भने सिर्जना भइसकेको छ । मेरो उम्मेद्वारीले उहाँहरुलाई पनि मेरो स्तरको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन दवाव पर्छ । त्यो राम्रो पनि हो ।
त्यसोभए, जीत निश्चित छैन भन्ने जानेरै निर्वाचनमा सहभागि हुन लागिएको हो ?
होइन । मैले जीवनमा हार्न जानेको छैन र यो विशेष परीक्षामा पनि हार्दिन भन्ने विश्वास छ । यसमा अत्याधिक मतदाताको मतले जित्नेछु । शहरका कुनाकाप्चाबाट जुन प्रतिक्रिया आएको छ त्यसैले चुनाव जित्ने आधार देखिइसक्यो । हामी विल्कुल नयाँ ढंगबाट चुनाव प्रचार गरेर साँच्चै हामी नै नयाँ शक्ति हौं भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउँछौं ।
तपाईंहरुको चुनावी प्रचारका कार्यक्रमहरु अरुभन्दा कसरी फरक हुन्छ ?
हामी तडकभडक गर्दैनौं । पर्चा, ब्यानर, भिडभाड गर्दैनौं । अहिलेका उपलब्ध सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गर्छौं । सकेसम्म कम खर्चमा चुनावमा सहभागी हुने हाम्रो लक्ष्य छ ।
काठमाडौंमा जन्मिनुभयो यही हुर्किनुभयो । सरकारी सेवामा रहँदा पनि लामो समय काठमाडौंमै रहनुभयो । तपाईको परिकल्पनाको काठमाडौं महानगरपालिका चाहीँ कस्तो हो ?
सबै वर्गका मानिसहरु अटाउन सक्ने, यो मेरो शहर हो भनेर सबै नागरिकहरुले गर्व गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि काठमाडौं भनेको एउटा राम्रो पर्यटकीय र साँस्कृतिक शहर हो त्यहाँ जीवनमा एकपटक पुग्नैपर्छ भन्ने महानगरपालिका काठमाडौलाई बनाउन सकिन्छ ।
काठमाडौंको मेयरमा जित्नुभयो भने तपाईको प्राथमिकताका पाँच काम के हुनेछन् ?
पहिलो काम चाहीँ वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्छौ । यो काम केही हप्तामा नै गर्न सकिन्छ । दोस्रो, काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधान गर्ने । निजी क्षेत्रलाई समेत समाभागी गराएर, उनीहरुको मन जितेर सडक र सवारी सुधारको काम गर्छौ । तेस्रो, काठमाडौंमा रहेका नदीनाला, ढुङ्गेधारा, पोखरीहरु र अरु सम्पदाको सरसफाई र स्वच्छता कायम गरी सहरलाई सराभरा बनाउने । चौंथो, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिक र तेस्रो लिङ्गी जस्ता विशेष समुहहरुलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार र सेवाको विकास गर्ने र पाँचौ, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्पदाहरुको स्वच्छता र पवित्रता कायम गरी धार्मिक र आध्यात्मिक आनन्दको वातावरण कायम गर्ने । यी ५ वटै काम केही समयमा नै गर्न सकिने काम हुन । दीर्घकालिन रुपमा गर्न सकिने कामहरुको योजना बनाउँदैछौं ।
विश्वव्यापी रुपमा महानगरपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालका महानगरको संरचना बनेकै छैन । यस्तो अवस्थामा तपाइँले भनेका काम छोटो समयमा गर्न सकिएला र ?
अरु उम्मेदवारलाई भन्दा मलाई लड्न सजिलो छ । म त त्यो तहमा बसेर काम गरेको छु । कस्तो व्यवहार हुन्छ त्यो देखेको छु । म मेयर भइसकेपछि त उहाँहरुको भाषा बुझ्छु नि । संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार त हामी राख्छौं । त्यसमा त कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन् । काम गर्न त नेपालमा जटिलता र चुनौती छन् । त्यसैले त विगतमा काम हुन नसकेको हो नि । ती चुनौतीलाई चिर्न सक्नु भन्ने विश्वास म सँग छ । मैले नेपाल सरकारको नीतिगत तहमै बसेर जे जति काम गर्न सकेँ त्यँहीबाट यो विश्वास आएको हो । शहरी विकास परियोजनाको आयोजना प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव पनि मसँग छ ।
तपाईले शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवको रुपमा पनि केही वर्ष काम गर्नुभयो । त्यसबेला काठमाडौंको सुधारको लागि गर्नुभएको देखिने काम के छन ? अथवा, सुधार गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ?
त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु । सबैले असम्भव भनेको सडक विस्तारको काम हामीले गरेर देखायौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना भताभुङ्ग हुन लागेको थियो त्यसलाई हामीले ट्रयाकमा ल्याएर अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नदिनाला सफाइको काम सुरु गर्यौं । एउटा सानो नमुनाको रुपमा नारायण चौरमा पार्क बनाएका छौं ।
त्यतिखेर तपाईले २०७३ बैशाख १ गते नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आइसक्छ भन्नुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म आएन ?
२०७३ बैशाख १ गतेको लक्ष्य हावादारी थिएन । धेरै क्याल्कुलेसन गरेरै त्यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । २०७२ वैशाखमा भूकम्प आयो । त्यसपछिको नाकाबन्दीको कारणले त्यो आयोजना झन्डै डेढ वर्ष पछाडि धकेलियो । यद्यपी ती आयोजनामा कुनै संरचना भत्किएन । यसले काममा चाहीँ ढिला बनायो । यदि, त्यसरी अवरोध नभएको भए मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्थ्यो । जुनुसकै कारणले लक्ष्य पुरा नभएको भए पनि मैले सार्वजनिक रुपमै क्षमा याचना गरिसकेको छु ।
तपाई यस्तो भिजन भएको मान्छे, नीति निर्माण तहमा बसेर काम गरिसकेको मान्छेले संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएर मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य राख्नुपर्ने हो । किन, मेयरको रुपमा काठमाडौंको साँघुरो घेरामा सीमित हुनु लाग्नुभएको ?
हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त नै तलबाट उठेर जाने छ । हामी हावामा तैरिन चाहँदैनौं । हामी जनस्तरबाट उठ्दैउठ्दै माथि जान्छौं । मलाई के विश्वास छ भने म मेयर भएर पाँच वर्ष काठमाडौंको नेतृत्व गरेपछि भोलि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनको लागि पनि योग्य हुनेछु । यस्तो उदाहरणहरु संसारको धेरै देशमा देखिन्छन् । शहरको मेयर भएर त्यो देशको प्रधानमन्त्री भएको वा राष्ट्रपति भएको प्रशस्त उदाहरण छन् । यहाँ पनि त्यो गरेर देखाँउछु ।
तपाइँहरुले भन्नुभएको साझा पार्टीको सिद्धान्त के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त नभएको कति समय टिक्ला र भन्ने पनि धेरै छन नि ?
तपाईले भन्न खोज्नुभएको वादको कुरा हो । कुनै वादमा विश्वास गरेर अघि बढेका पार्टीहरुले यो मुलुक कति बनाउन सके ? वादले मात्रै त मुलुक विकास हुँदैन । यद्यपी ती वाद आफैमा खराब होइन । तर वाद मात्रै समातेर हुँदैन् । अरु देशमा पनि वादले मात्रै विकास भएका छैन । स्पष्ट भिजन, स्पष्ट कार्ययोजना र जनताको प्रयासले नै देशको विकास हुने हो । नेताहरुले नेतृत्व गर्ने र आमजनताले सहयोग गरेर देश विकास हुने हो । वाद राम्रो हुँदैमा नराम्रो हुँदैमा देश विकासमा त्यसले असर पार्दैन । हामीले अब पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो । पद्धतिमा आधारित, विवेकमा आधारित र इमानमा आधारित राजनीति गर्ने हो । त्यो गरेर देखाउन सकिन्छ भनेर नै हामीले पार्टी गठन गरेका हौं । लोकतन्त्र त सबैले विश्वास गरेको विषय हो । हामी सहभागितामा विश्वास गर्छौै । हामी लिबरल वेलफेयर इकोनोमी भन्छौं । त्यो भनेको चाहीँ उदार कल्याणकारी अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने । जो पुँजीपतिहरु छन् उहाँहरुको पनि पुँजीमा वृद्धि हुँदै जाने, उहाँहरुले पनि निस्फिक्रीसँग लगानी गर्न पाउने र उहाँहरुले आर्जन गरेको सम्पत्तिको केही अंश तल्लो तहका जनता र बस्तिमा पुग्ने । त्यो हो हामीले भनेको लिबरल वेलफेयर इकोनोमी ।
सिद्धान्त जस्तोसुकै ल्याए पनि मतदाता चाहीँ खाजाको मेन्यू हेरेर अन्तिममा मःमः रोज्ने खालका छन भनेर रविन्द्रजीले भन्नुभयो । पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले त मतदाताहरु पैसामा बिकिसके भन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तले केही फरक पार्छ र ?
जनताले मेनु हेर्दा हामी त्यो मेनुको बारेमा सबै बताइदिन्छौं । किनकी, उहाँहरु मेन्यूको बारेका केही नबुझेर अन्तिममा मःमः अर्डर गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् । मेन्यूमा भएका विभिन्न परिकारका बारेमा उहाँहरुलाई बताइदिने काम गर्छौ । त्यसमध्ये छान्ने नछान्ने त उहाँहरुको कुरा हो । तर, उहाँहरुलाई गुमराहमा राखेर मःमः मात्रै ठिक अरु सबै खत्तम भनेर झुक्याउनु ठिक होइन । अहिले त जनताको चेतनास्तर पनि बढेको छ । आजभन्दा ५० वर्ष पहिलेको जनता र अहिलेको जनताको स्तर त उही छैन् । अब उहाँहरु पनि सधैं मःमः मात्रै खाने कि अरु परिकार पनि छान्ने भन्नेमा स्पष्ट भइसक्नुभएको छ ।
पार्टी खोल्न र राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलै रकमको जोहो गर्नुपर्छ । आफै पैसा हालेर राजनीतिक गतिविधि गर्नुहुन्छ कि केही वैकल्पिक उपायहरु सोच्नुभएको छ ?
हामी जनताको योगदानबाट नै चल्छौं । हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको योगदानबाट र यसका समर्थकहरु सदस्यहरुबाट चल्छ । हामी राम्रो नेतामा दरियौं भने हामीलाई नेपाली जनताहरुले नै पाल्नेछन् । तर, यसको लागि चाहीँ हामीले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्छ । हाम्रो कामले जनताको स्तरमा सुधार आयो भने जनताले पाल्छन् ।
त्यो त दीर्घकालिन कुरा भयो । तत्कालको लागि कार्यलय स्थापना गर्नुपर्याे, संगठन विस्तारको काम गर्नुप¥यो । चुनाव आएको छ खर्च चाहियो । त्यसको व्यवस्थापन चाहीँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रा सदस्यहरुबाट हामीले उठाएका छौं । हाम्रो पार्टी पारदर्शी छ । हाम्रो आम्दानी खर्च सबैले हाम्रो कार्यलयमा आएर जुनसुकै बेला हेर्न सक्नुहुन्छ ।
धेरै पार्टीमा स्वास्र्थ समूहरुले खर्च गर्ने र पार्टीले पनि स्वार्थ समूहको हितमा मात्रै काम गर्ने देखियो । यस्तो स्वास्र्थ समूहले त जोसुकैलाई प्रभावमा पार्न खोजिहाल्छ नि होइन ?
हामी जो पायो त्यहीबाट चन्दा लिँदैनौं । हाम्रो पार्टिको सिद्धान्तबाट बाहिर जाँदैनौं । हामीलाई सहयोग गर्ने मानिसहरुको पृष्ठभूमी हेर्छाैं । उहाँहरु राम्रो पृष्ठभूमीको हुनुहुन्छ र उहाँहरुको सहयोगको कारणले हाम्रो नीतिगत निर्णयमा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राख्छौं । सहयोग नआए पनि हामीलाई कुनै फरक पर्दैन । हामी त साह्रै किफायति ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्छौं । हामी विभिन्न पेशाबाट आएकोले हामी आफैं पनि चल्न सक्छौं ।
भिडियाेमा हेर्नुस विस्तृत कुराकानी